ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါလီမန်များ ညီလာခံအစည်းအဝေး ပထမနေ့သို့ တက်ရောက် | Pyithu Hluttaw
ဂျီနီဗာ အောက်တိုတာ ၈
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အောက်တိုဘာ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျီနီဗာမြို့၌ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် (၁၂၉)ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပါလီမန်များညီလာခံ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည်။
(၁၂၉)ကြိမ်မြောက် IPU ညီလာခံအစည်းအဝေးတွင် IPU ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr. Abdelwahad Radi က အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပါလီမန်များသမဂ္ဂ (Inter-Parliamentary Union-IPU) သည် လွတ်လပ်သည့် အချုပ်အခြာ အာဏာပိုင်နိုင်ငံများ၏ ပါလီမန်(လွှတ်တော်)များ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်သည်။ IPU ကို ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးအတွက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၊ ပြည်သူများအကြား ဆွေးနွေးရေး အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီး IPU အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အာဆီယံပါလီမန်များ ညီလာခံ(AIPA) တင်းပြည့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာပြီး IPU အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရေး အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၅ ရက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံအား IPU အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအဖြစ် (Governing Council) က လက်ခံဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် (၁၂၉)ကြိမ်မြောက် IPU အစည်းအဝေးသို့ အဖွဲ့ဝင် ၁၆၂ နိုင်ငံနှင့် တွဲဖက်အဖွဲ့ဝင် ကိုးနိုင်ငံမှ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်လျက်ရှိသည်။
IPU အစည်းအဝေး တက်ရောက်လျက်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကသည် စက်တင်ဘာ ၇ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် မော်ရိုကိုနိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ (President of House of Councillors) ခေါင်းဆောင်သော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် IPU ညီလာခံ Salle (11) ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းနောက် ညနေပိုင်းတွင် IPU ဥက္ကဋ္ဌ H.E.Mr Abdelwahad Radi နှင့်လည်းကောင်း၊ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. Willien Hay ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် လည်းကောင်း၊ IPU, Secretary- General Mr.Arders B. Johnsson နှင့်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ (သတင်းစဉ်)